“Si buuxda ayaan u ixtiraamayaa go’aankiisa” – Matić oo beeniyay inuu khilaaf kala dhexeeyo tababare Solskjær – Gool FM
“Si buuxda ayaan u ixtiraamayaa go’aankiisa” – Matić oo beeniyay inuu khilaaf kala dhexeeyo tababare Solskjær
Dajiye September 4, 2019
(Manchester) 04 Sebt 2019. Xiddiga kooxda Manchester United ee Nemanja Matić ayaa beeniyay in wax khilaaf ah uu kala dhexeeyo macalinkiisa Ole Gunnar Solskjær.
Dhinaca kale laacibka reer Serbia ayaa tilmaamay in loo baahan yahay tababaraha inuu doorto kooxda uu ku dagaalamayo si uu koob ugu guuleysto.
Nemanja Matić ayaa ciyaaray kaliya 22 daqiiqo ee ah kulamada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan waana kulankii Southampton, taasoo dhalisay shaki ku saabsan mustaqbalka xiddiga reer Serbia, kaasoo mar ahaa udub dhexaadka safka Red Devils.
Haddaba Matić ayaa wareysi uu maanta bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Wax dhib ah nagama dhaxeyso aniga iyo Solskjær, waxaan u sheegay inaan ku raacsaneyn inaan fariisto kursiga keydka, laakiin go’aanka lagu xusho line-upka kooxda, waxay ugu dambeyntii ku xiran tahay tababaraha”.
“Waxaan khibrad badan u leeyahay kubadda cagta waan ogahay inaan door muhiim ah ka qaatay mustaqbalkeyga ciyaareed, kaddib markii la i doortay, tani waa dabeecadda kubadda cagta, haatan xaalada ayaa isbadeshay waxaana fadhiyaa kursiga keydka”
“Waxaan u shaqeenayaa sida ugu xoogan ee suurtogalka ah, si buuxda ayaan u ixtiraamayaa go’aankiisa”.
Tan iyo markii uu Manchester United kaga soo biiray Chelsea sanadkii 2017, Nemanja Matić wuxuu boos joogto ah ka helay kooxda Man United, isagoo ciyaaray 36 kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkii 2016/17, iyo 28 kulan ee horyaalka ah xilli ciyaareedkii hore.
WARBIXIN: Sirta ka dambeysa magaca KUN AGUERO & Sida uu magacan ugu baxay halyeeyga kooxda Man City